Mogadishu Journal » Soomaaliland: Wadahadal lama galeyno Soomaaliya ilaa madaxbannaani nala siiyo
Mjournal :-Madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si caro leh u sheegay in maamulkiisu uusan wada hadal la gali doonin Soomaaliya ilaa inta laga siinayo madaxbannaani.
“Ma aha Soomaaliland mid indhaha laga qarin karo. Xuduudkii uu ingiriiska dhisay baan ku taagannahay, waxaana dooneynaa ineynu wadahadal iyo nabad ku kala baxno laakiin inamada maanta Xamar ka talinaya wey la noqon weyday ” ayuu yiri Muuse Biixi.
“Ballan waxaan ku qaadnay in aynaan wada hadlin inaad timaaddaan idinkoo xornimadeenna ogol mooyaane”,
Arrintan ayey mas’uuliyiinta Soomaaliland ku micneeyeen mid salka ku heysa tabasho ay Soomaaliland ka qabto dowladda Soomaaliya ee uu hoggaanka u hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Madaxweynuhu hadalka uu sheegay sidaas ayuu ku saxan yahay, waxaana kuu caddeyneynaa xukuumad ahaan in dowladda Farmaajo ay shaqo ka dhigatay iney maalin walba si bareer ah u xaasiddo guulaha iyo horumarka Soomaaliland. Annaguna haddaan nahay xukuumadda Soomaaliland waan joojinay wadahadalkoodi, mana aqbaleyno in aan hadal lasii wadno nin maalin walba ku mashquulsan dib u dhaceenna”. Ayuu yiri afhayeenka.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas sii raaciyay: “Waxaan u sheegeynaa beesha caalamka inaan diyaar u ahayn wadahadalka laakiin aan iyaga ka wadi weynay maadaama ay mar walba faragalin ku hayaan masiirkeenna ayna dafirayaan horumar walba oo aan gaarno, dagaalna nagu hayaan”.
“Annagu waxaan nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland, dalkeennu wuxuu ku yaallaa geeska Afrika, waxaana ka mid nahay waddamada ku yaalla gobolka oo ay Jabuuti ku jirto. Madaxweyneyaasha kulmay iyo midnimada ay ka hadlayeen waa wax danohooda ah oo iyaga ka dhexeeya annaguna waxaan kala mid nahay dalalka kale ee gobolka”.
Madaxda dowladdaha Soomaaliya iyo Talyaaniga oo ka wada hadlay xiriirkooda